Skunk Tsvuku Bvudzi | MyWeedSeeds.com
Skunk Tsvuku Bvudzi mbanje yakagadzirwa mukutanga kwema1980. Kare ikako, huwandu hwakawanda hwebvudzi dzvuku raive chiratidzo chakanakisa chekutapira, mhando dzemhando yepamusoro - uye chirimwa ichi chinoshamisa chinopa. Akafukidzwa nebvudzi dzvuku uye anopa kuravira kunofadza uye kwakakwirira. Skunk Tsvuku Bvudzi inoramba iri sarudzo inodiwa yevarimi vazhinji vemukati (kunyangwe iye ari tastier kana akura kunze). Ipo iye achizokura akareba kunze, iwe unogona nyore kudzora kukwirira kwake. Iye chirimwa chakasimba chine bundu rakaomarara. Anovandudza hunhu hwakasarudzika, hunhu kukuudza kuti inguva yekukohwa. Skunk tsvuku bvudzi mbanje zvinomera zvinogona kukura zvakareba uye zvine simba, asi zvinogona kudzorwa zviri nyore pakureba. Skunk Tsvuku Bvudzi mbanje haikunde kana kukurira chero nzira. Iye akatsetseka uye akapfava. Mageneti ake akamubvumidza kuisa kunhuhwirira kweskunk neinonaka-inotapira. Iye anokupa iwe stoney yakakwira neakanaka ese-akatenderedza buzz.